12/06/2018 - Page 3 sur 4 -
Analakely : Fiara 4×4 nifaoka mpandeha an-tongotra roa
12/06/2018 admintriatra 0
Vehivavy manodidina ny 50 taona sy tovolahy 24 taona no voafaokan’ny fiara 4×4 teny Analakely akaikin’ny magazay Tripolatsa misy ny Gastro Pizza omaly tokony ho tamin’ny 05 ora sy sasany maraina. Samy voa teo amin’ny …Tohiny
Herisetra miaro habibiana : Vaviantitra voaolana sy maty novonoina
Habibiana tsy roa aman-tany no niseho tany Holoka, tanàna 03 kilometatra miakandrefana amin’ny fokontany Betaimboay, distrikan’i Kandreho ny sabotsy 09 jona lasa teo, tokony ho tamin’ny 06 ora sy fahefany hariva. Ramatoa lehibe, efa mananika …Tohiny
Andro ririnina : Mbola miteraka tsy fitovian-kevitra ny fomba amam-panao amin’ny famorana
Dingana iray lehibe eo amin’ny fiainana ho an’ny zazalahy malagasy ny fanaovana didim-poitra, na hasoavana, na famorana. Lalam-piainana hidiran’izy ireo amin’ny tena maha-lehilahy. Na efa azo atao mandava-taona aza, dia ny andro ririnina toa izao …Tohiny
Omaly ny fe-potoana farany nodidian’ny fanapahana navoakan’ny Hcc fa hamoahana ny lisitry ny mpikambana ao anaty governemantan’ny fisokafana. Ny fotokevitra amin’izany moa dia ny hoe governemanta handraisan’ny rehetra anjara. Hita taratra tokoa izany raha mijery …Tohiny
Fandrobana sy fandorana : Talentan’ny TGV sy ny TIM
Nitohy tany Antsirabe ilay voalaza fa fitsaram-bahoaka nahazo ilay mpandraharaha tany Betafo araka ny fanampim-baovao azo. Fitenenana entina hanalokalofana ny heloka fotsiny ihany anefa ity hoe “fitsaram-bahoaka” ity fa fandrobana sy fandorana tsotra izao raha ...Tohiny